Global Voices teny Malagasy · Desambra 2020
Tantara misongadina tamin'ny Desambra 2020
Angletera30 Desambra 2020
Haiti29 Desambra 2020
Orogoay29 Desambra 2020
Tantara tamin'ny Desambra, 2020
Na inon-kidona, na inon-kihatra, isisihan'i Alpha Condé ny tsy maintsy hahazoana fepotoam-piasàna fanintelony
Ginea 30 Desambra 2020
Nahavita naka fepotoam-pitondrana fanintelony indray ny filoha gineàna Alpha Condé rehefa nanao an-tery ny fanitsiana lalampanorenana, fandresena azony tamin'ny fifidianana nokianin'ny mpanohitra sy ireo fikambanana iraisampirenena mafy tokoa
Vaovao farany Lingua volana Oktobra 2020
Mediam-bahoaka 27 Desambra 2020
Manolotra ny vaovao mikasika ny Lingua volana Oktobra 2020 ny mpitantana ny Lingua.
Global Voices ao amin'ny The Economist
Mediam-bahoaka 26 Desambra 2020
(Lahatsoratra taona 2010) Noho ny fandaminana manokana dia mandefa lahatsoratra tsindraindray ao amin'ny bilaogin'ny The Economist Babbage momba ny teknolojia ny mpanoratra Global Voices manerantany. Tsy mitovy amin'ireo lahatsoratra mahazatra ao amin'ny Global Voices ireo lahatsoratra satria matetika no misy famakafakana bebe kokoa ary tsy mifantoka betsaka amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra. Ary...
Fomba 4 hanohanana ny Global Voices (sy irariantsoa taombaovao!)
Mediam-bahoaka 25 Desambra 2020
Raha mamaky ity ianao inoana fa sakaizan'ny Global Voices izay mino ny iraka ataonay hilaza izay tsy heno any amin'ny fampitam-baovao lehibe mahazatra, sy amin'ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahazoana miditra malalaka amin'ny fampahalalam-baovao an-jotra. Tianay ny haka fotoana hisaorana anao sy fomba hafa hanampianao anay.
Taratasim-baovao RV: Jery todika ny fivoriana an-tserasera Natives in Tech 2020
Mediam-bahoaka 23 Desambra 2020
Manome ny rohy mifandraika amin'ny fampidirana nomerika ny taratasim-baovao Rising Voices, ao anatin'izany ny fidirana sy ny fampiasana ny fitaovana nomerika sy ny fomba samihafa ahafahan'ny vondrom-piarahamonina mandray anjara feno anjotra ihany koa.
Azia Atsinanana 22 Desambra 2020
"Natao hiaro ireo eo amin'ny fitondràna tsy hiharan'ny tsikera rehefa manao kolikoly ry zareo na heloka hafa io tolodalàna io."